Eliza March Promotions!!!🎉🎉🎉 - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
March 6, 2020 | by Eliza Skin Republic
1 March 2020 ကနေ 31 March 2020 အထိ March လတဈလလုံး Eliza မှာရှိနမေယျ့ Promotion တှကေို တဈစုတဈစညျးထဲ ကွညျ့လို့ရအောငျ ပွနျပွီးတငျပေးလိုကျပါတယျနျော။
1 March 2020 ကနေ 31 March 2020 အထိ March လတစ်လလုံး Eliza မှာရှိနေမယ့် Promotion တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ ကြည့်လို့ရအောင် ပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
▪️ March Loyalty Promotion
▪️ 50,00 off Coupons သုံးပြီး 10,000 off Coupons လေးရယူပါ
Promotion တွေရဲ့ အသေးစိတ်လေးတွေကတော့ ….
◼️March Loyalty Promotion 🎉
▪️ New Customer – 20% off
▪️Old Customer – 25% off
▪️ VIP Customer – 30% off
🔸ဒီ Promotion လေးရယူဖို့တွက်ကတော့ ဆိုင်မှာရောက်နေကြောင်းလေးကို Public Check In လေးဝင်ပေးနော်။
▪️ New Customer -20% Off
Eliza မှာ Treatment တစ်ခါမှလာမလုပ်ဘူးသေးလို့ စမ်းပြီး Treatment လာလုပ်ချင်တဲ့ သူတွေတွက် March လမှာ Eliza ဆိုင်တွေကိုလာပြီး Complete Facial Treatment လာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးအကြိမ်တွက် 20% Off Discount ရမှာပါနော်။
▪️ Old Customer – 25% Off
Eliza ရဲ့ Treatmentတွေကို ပုံမှန် အားပေးနေကျ Customer တွေအတွက်ကတော့ March လအတွင်း Complete Facial Treatment လာလုပ်ရင်တော့ 25% Off Discount ရမှာပါ။
🔸Old Customer ဖြစ်ကြောင်း ကို တော့ Eliza ရဲ့ Reward Card လေးယူပြီး Cashier မှာပြပေးရမှာပါနော်။
▪️VIP Customer – 30% Off
VIP Card ရှိတဲ့ Customer တွေ အတွက်ကတော့ Eliza မှာComplete Facial Treatment လာလုပ်ရင်တော့ 30% Off Discount လေးရမှာပါနော်။
🔸VIP Customer ဖြစ်ကြောင်းကို VIP card လေးတော့ယူခဲ့ပြီး Cashier မှာပြပေးနော်။
◼️ Birthday Month Promotion🎉
March လအတွင်း မွေးတဲ့ သူတိုင်းက Eliza မှာ ဘာ Treatment လုပ်လုပ် 30% ပေးမှာပါ Treatment 30% discount အပြင် ဘာ Skincare ဘဲ ဝယ်ဝယ် 10% discount ထပ်ရမှာပါ။
▪️ဒါ့အပြင်မွေးနေ့ရက်အတိအကျမှာလာတယ်ဆိုရင်တော့ Aloe Vera Gel ကို 5500 ကျပ်ထဲနဲ့ရောင်းပေးမှာပါနော်။
Promotion လေးကိုရယူဖို့အတွက် မွေးနေ့ရှင်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးဘဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူ လာခဲ့ပေးရပါမယ်နာ်။ ပြီးရင်တော့ Eliza Skin Republic မှာရောက်နေကြောင်း Public နဲ့ Check In ဝင်ပေးပြီး အတူလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကို Mention ခေါ်ပေးပါနော်။ မွေးနေ့ရှင်အနေနဲ့ March လမှာ မွေးဖွားကြောင်းအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ (မှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နဲ့ Passport) စတာတွေထဲကတစ်ခုခုကို Cashier မှာပြပေးပြီး Discount ကိုရယူနိုင်ပါတယ်နော်။
◼️50,00 off Coupons သုံးပြီး 10,000 off Coupons လေးရယူပါ 🎉
Eliza မှာ မတ်လအတွင်း ပထမအကြိမ် Facial Treatment လာလုပ်တုန်းက ပေးထားတဲ့ 5,000 Off Coupons လေးတွေနဲ့ Cashier မှာ ရှင်းရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် တစ်လအတွင်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ 10,000 Off Coupons လေးပြန်ရမှာပါနော်။
🚫Promotion တွေကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တွဲသုံးလို့မရပါဘူးနော်။
အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှု အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်းတွေ နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ELIZA မှာ Facial Treatment ပုံမှန်လုပ်ရင်း အသားအရေလှပဖို့အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြစို့နော်။
လိပ်စာ – အမှတ် (၄၀)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
လိပ်စာ – အမှတ် ၉၇(A)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ သစ္စာလမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းကြား၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
လိပ်စာ – အမှတ် (၁၂၃)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
လိပ်စာ – အမှတ် ၂၅၇၊ ၃၃ လမ်း (၈၃ x ၈၄)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
▪️ 50,00 off Coupons သုံးပွီး 10,000 off Coupons လေးရယူပါ
🔸ဒီ Promotion လေးရယူဖို့တှကျကတော့ ဆိုငျမှာရောကျနကွေောငျးလေးကို Public Check In လေးဝငျပေးနျော။
Eliza မှာ Treatment တဈခါမှလာမလုပျဘူးသေးလို့ စမျးပွီး Treatment လာလုပျခငျြတဲ့ သူတှတှေကျ March လမှာ Eliza ဆိုငျတှကေိုလာပွီး Complete Facial Treatment လာလုပျမယျဆိုရငျတော့ ပထမဆုံးအကွိမျတှကျ 20% Off Discount ရမှာပါနျော။
Eliza ရဲ့ Treatmentတှကေို ပုံမှနျ အားပေးနကြေ Customer တှအေတှကျကတော့ March လအတှငျး Complete Facial Treatment လာလုပျရငျတော့ 25% Off Discount ရမှာပါ။
🔸Old Customer ဖွဈကွောငျး ကို တော့ Eliza ရဲ့ Reward Card လေးယူပွီး Cashier မှာပွပေးရမှာပါနျော။
VIP Card ရှိတဲ့ Customer တှေ အတှကျကတော့ Eliza မှာComplete Facial Treatment လာလုပျရငျတော့ 30% Off Discount လေးရမှာပါနျော။
🔸VIP Customer ဖွဈကွောငျးကို VIP card လေးတော့ယူခဲ့ပွီး Cashier မှာပွပေးနျော။
March လအတှငျး မှေးတဲ့ သူတိုငျးက Eliza မှာ ဘာ Treatment လုပျလုပျ 30% ပေးမှာပါ Treatment 30% discount အပွငျ ဘာ Skincare ဘဲ ဝယျဝယျ 10% discount ထပျရမှာပါ။
▪️ဒါ့အပွငျမှေးနရေ့ကျအတိအကမြှာလာတယျဆိုရငျတော့ Aloe Vera Gel ကို 5500 ကပျြထဲနဲ့ရောငျးပေးမှာပါနျော။
Promotion လေးကိုရယူဖို့အတှကျ မှေးနရှေ့ငျအနနေဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့ဘဲ ဖွဈဖွဈ သူငယျခငျြးတှေ အမြားကွီးဘဲဖွဈဖွဈ အတူတူ လာခဲ့ပေးရပါမယျနျာ။ ပွီးရငျတော့ Eliza Skin Republic မှာရောကျနကွေောငျး Public နဲ့ Check In ဝငျပေးပွီး အတူလာတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ကို Mention ချေါပေးပါနျော။ မှေးနရှေ့ငျအနနေဲ့ March လမှာ မှေးဖှားကွောငျးအထောကျအထားတဈခုဖွဈတဲ့ (မှတျပုံတငျ၊ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျနဲ့ Passport) စတာတှထေဲကတဈခုခုကို Cashier မှာပွပေးပွီး Discount ကိုရယူနိုငျပါတယျနျော။
◼️50,00 off Coupons သုံးပွီး 10,000 off Coupons လေးရယူပါ 🎉
Eliza မှာ မတျလအတှငျး ပထမအကွိမျ Facial Treatment လာလုပျတုနျးက ပေးထားတဲ့ 5,000 Off Coupons လေးတှနေဲ့ Cashier မှာ ရှငျးရငျတော့ နောကျတဈကွိမျအတှကျ တဈလအတှငျးအသုံးပွုနိုငျတဲ့ 10,000 Off Coupons လေးပွနျရမှာပါနျော။
🚫Promotion တှကေတော့ တဈခုနဲ့တဈခု တှဲသုံးလို့မရပါဘူးနျော။